चीनको उद्घोष– ‘चीनमा नयाँ युगको आरम्भ, सीको दोस्रो नेतृत्वमा कहाँ पुग्ला त चीन ?
माओपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली चिनियाँ राष्ट्रपतिका रुपमा उदाए सी
निर्माण सञ्चार, सिन्हवा । दोस्रो कार्याकालका लागि पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ कम्युनिस्ट पार्टी (सिसिपिसी) को महासचिवमा निर्वाचित भएपछि विश्वभर नयाँ तरंग छाएको छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं महाधिवेशनले राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई ‘महान चिन्तक’का रुपमा प्रस्तुत गर्दै उनको विचारलाई पार्टीको कार्यानिर्देशका रुपमा ग्रहण गरेको छ ।
चिनिया समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले यसबारे उल्लेख गरेको छ ।
उनलाई माओ नेतृत्वको नयाँ जनवादी क्रान्तिपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली नेताका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।
पार्टीको मंगलबार सकिएको महाधिवेशनले चीनको संविधान संशोधनलाई पारित गरेको छ, जसमा सीको विचारधारालाई पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
सीले ‘नयाँ युगका लागि चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ को विचारधारालाई अघि बढाएको र त्यसले चीन थप विकास र समृद्धितर्फ अघि बढेको भन्दै त्यसलाई माओ, देङकै दर्जा दिएको हो ।
सिपिसी महाधिवेशनको प्रस्तावनामा यो उल्लेख छ ।
महाअधिवेशनले प्रधानमन्त्री ली खछियाङसहित ११ जनालाई सिपिसीको केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित गरेको छ । त्यस्तै, पारित संविधान संशोधनमा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँलाई बृहत्तर प्रयासमार्फत जारी राख्ने पनि उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति सीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएपछि त्यहाँ ठूलो संख्यामा भ्रष्टाचार विरुद्धका मुद्दा अघि बढेका छन् भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता हासिल भएको छ ।
समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले चिनियाँ समाजवादी प्रणालीले ठूलो शक्ति र साहस प्रदर्शन गर्ने र त्यसले चिनियाँ नागरिकको भविश्य उज्वल रहेको बताएका छन् ।
योसँगै दोस्रो पाँच वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका सीको नयाँ टिम समेत चयन भएको छ ।
१९ औं काँग्रेसले बुधबार बिहानको विस्तारित बैठकबाट सी सहितको नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । तर, नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको भनिए पनि शीर्ष नेताहरु भने पुरानै अनुहार दोहोरिएका छन् ।
स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ, ली चानसाउ, वाङ याङ, वाङ हुनिङ, चाउ लिजी र हान चाङ रहेका छन् ।
यस अघि स्थायी समितिमा एक उदीयमान नेताल ल्याउने चलन थियो ।
ताकि दोस्रो पुस्ताका रुपमा उसलाई चिनाइन्थ्यो । जस्तो कि तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिन्ताओकै समयमा भावी राष्ट्रपतिका रुपमा सी जिनपिङलाई अघि सारिएको थियो ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने हरेक महाधिवेशनले भावी पुस्तालाई चर्चामा ल्याउने चलन थियो । तर, राष्ट्रपति सीले पार्टीको यो परम्परा तोडेका छन् ।
योसँगै, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी मात्र नभई सिंगो चीन चलाउने सो पार्टीको ‘फस्ट पर्सन’ का रुपमा सीले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट जुन उचाइ पाएको भनिन्छ, सो कामलाई अघि बढाउने प्रण कम्युनिस्ट पार्टीको यस अध्यायले पनि निरन्तरता दिएको छ ।
चाउ लिजीलाई भ्रष्टाचारविरोधी आयोगको प्रमुख बनाइएको छ ।
सी दोस्रो कार्यकालमा पनि राष्ट्रपतिमा चयन भएपछि विश्वका सबै शक्ति राष्ट्रहरुको ध्यान खिचेको छ ।
आउँदो ५ वर्ष भित्र चिनियाँ शक्ति कहाँसम्म विस्तार हुन्छ ? भन्ने विषय नै यतिबेला अमेरिकी समाचार एजेन्सीदेखि ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ एजेन्सीहरुको समेत बहसको विषय बनेको छ ।